सिकारुहरूको लागि पेट नृत्य महिलाहरु थप मोहक बन्न मदत गर्नेछ
पेट नृत्य अभिव्यक्ति को एक उत्कृष्ट तरिका हो। यो आफ्नो प्रिय गर्न आकर्षित गर्न एक उत्कृष्ट उपकरण छ। शुरुआती लागि पेट नृत्य पाठ केही सत्र यो कला मास्टर मदत गर्नेछ।
ढिलाइ र अहिले कक्षाहरू सुरु गर्न - तपाईंको शरीर लचीलापन, मुख्य कुरा दिन आदेश पक्षमा धेरै तर्क हो।
पेशेवरहरुको लागि रूपमा शुरुआती लागि पेट नृत्य, उज्यालो razminochki सुरु। यो मांसपेशीमा अप न्यानो गर्न आवश्यक छ। तपाईं यसलाई बेवास्ता भने, तपाईंले एक मर्काइ वा dislocation प्राप्त गर्न सक्छन्। 10 मिनेट लागि Kneaded। तपाईंले केही हल्का बनाउन ठाउँ जस्तै हुन आवश्यक परिपत्र गति आफ्नो हातमा। बेल्ट मा आफ्नो हात राख्नु, सही र मिनेट को एक जोडी को लागि बायाँ मोड्नु पालना गर्नुहोस्। पछाडि र अघि Tilts को मेरुदण्ड तयार गर्न मदत हुनेछ, खुट्टा को मांसपेशिहरु र सत्र को मुख्य भाग गर्न थिच्नुहोस्।
"आठ" - सिकारुहरूको लागि पेट नृत्य आधारभूत अभ्यास को एक समावेश छ। तपाईं पहिलो आठ को तेर्सो आंकडा मानसिक कल्पना र यसको केन्द्र खडा गर्नुपर्छ। खुट्टा दाँया जांघ अलि अगाडि leans, अलग काँध-चौडाइ राख्नुभयो। तिनीहरूले काल्पनिक आठ को सही आधा मा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, तल्ला बन्द एडी तपाईं आंसू गर्न सक्दैन। प्रयोगले दौरान, जांघ ज्यादा देखि ज्यादा फिर्ता फिर्ता लिया। अब, यी नै manipulations बायाँ तर्फ एक बायाँ हिप संग बाहिर छन्। आन्दोलन र फिर्ता र निस्कने गरे। एक ढिलो गति तिनीहरूलाई प्रदर्शन, लगभग सबै अभ्यास को लागि शुरुआती पेट नृत्य समावेश। एक महिला त्यो सुन्दर बाहिर जान्छ रूपमा रमाउने, को आन्दोलन बाट खुशी प्राप्त गर्नुपर्छ।
र सर्कल र आफैलाई यो व्यायाम पूरा मा, नर्तक अब आठ हो - आंकडा को बीचमा। फिर्ता - धेरै सीधा। अब चाक को काम मा समावेश। तिनीहरूले यसलाई अधिकतम आयाम संग पालैपालो दुवै दिशामा फिर्ता लाइन को मंडल मा लगे थिए। एकै समयमा पेट आफूलाई मा आएको।
शुरुआती लागि पेट नृत्य पाठ र व्यायाम समावेश "rocking"। एक केटी उनको औंलाहरुमा, घुँडा अलिकति बाङ्गो मा खडा। खुट्टा - सँगै। पाठ्यक्रम मा नितम्ब छन्। दाहिने जांघ, बायाँ त्यसपछि पालैपालो गरेर rises। माथिल्लो शरीर गतिहीन रहनुपर्छ।
रूपमा प्रशिक्षण गर्न, पेट नृत्य स्थानको रूपमा कुशलतापूर्वक सकेसम्म शुरुआती लिए र समावेश व्यायाम "घरको छानो"। आफ्नो charmer आफ्नो मांसपेशिहरु महसुस गर्नुपर्छ पूरा, मात्र सही, तर पनि सुन्दर त्यसपछि प्राप्त। पहिलो, तपाईं धेरै आवश्यक भएको भुँडी फुल्नु गर्न, पनि उहाँलाई आफूलाई मा आकर्षित गर्न शक्ति संग र त्यसपछि। पहिलो पटक बिस्तारै 15-20 राशि वृद्धि र छिटो गति मा सार्ने, एक ढिलो गति मा 5-6 पटक प्रदर्शन। यो नि: शुल्क मा सास, तर यो थप बारम्बार वा ढिलाइ बन्न सक्दैन।
समय समयमा गर्न आन्दोलन थप र थप सुरिलो र प्लास्टिक हुनेछ। बिस्तारै जटिल र हात मा समावेश, तिनीहरूलाई समुद्र लहर गति अनुकरण गरौं। यस्तो "wave", "आरु" रूपमा काँध हुनेछ मा केही सत्र र थप जटिल व्यायाम, र अरूलाई पछि।
सिकारुहरूको लागि पेट नृत्य, महिलाहरु थप pliable बन्न मदत गर्नेछ महिला को समस्याग्रस्त क्षेत्रमा अतिरिक्त इन्च हटाउन र त्यो उहाँले सधैं मात्र उनको देखो हुनेछ धेरै प्रेम मानिस Fascinate!
क्लिप: के छ र त्यहाँ कस्तो थियो यस्तै घटना
"आकर्षक", एक कन्सर्ट हल (सेन्ट-पीटर्सबर्ग): ठेगाना र फोटो
कसरी र्याप लेख्न
सडक नृत्य कसरी नृत्य गर्न कसरी सिक्न? जहाँ सुरु गर्न?
प्रका भिटाली (पवित्र) जीवन र रोचक तथ्य